ကွာရှင်းပြတ်စဲထားသော သင်္ကြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကွာရှင်းပြတ်စဲထားသော သင်္ကြန်
Posted by စဆရ ကြီး on Mar 12, 2013 in My Dear Diary | 20 comments
ဘာလိုလိုနှင့် သင်္ကြန်တောင် နီးလာပေပြီ။ တစ်ချို့တွေကလဲ ရပ်ဝေးမြေခြားများမှ မြန်မာပြည်သို့ပြန်ပြီး ပျော်မြူးကြရန်အတွက် ခွင့်မရ ရအောင်တင်သူကတင်၊ ပြည်တွင်းနေသူတွေကလဲ သင်္ကြန်ကျရင် ဘာလုပ်မယ်၊ ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ငွေစုဆောင်းသူများ၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲနေကြသူများနှင့် အလုပ်တွေရှုပ်နေကြပေသည်။ ကိုရင်ရှူံးတို့ငယ်စဉ်ကတော့ ၀န်ထမ်းသားသမီးများပေမို့ (ထိုခေတ်ထိုအခါက) ယိမ်းကခြင်းကို လွန်စွာစိတ်ဝင်စားကြလေသည်။ ယခုခေတ်တွင်မတော့လဲ ယိမ်းကခြင်းကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့မိသည်။ ကိုယ်တွေ့တော့မဟုတ်ပဲ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပုံရိပ်များကို အိမ်သာပျက်ကြီးကနေတစ်ဆင့် မြင်မိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်နှစ်ကူးအခါတိုင်း အမျိုးသားများ ညီညီညာညာ ယိမ်းကနေလိုက်သည်မှာ တောင်ဘက်ယိမ်းလိုက်၊ မြောက်ဘက်ယိမ်းလိုက်နှင့် အချင်းချင်းယိမ်းရင်း ဖေးထိန်းပေးနေသလိုတောင် ဖြစ်သေးတော့သည်။ လက်များတွင်လည်း ပုလင်းများ၊ ဗူးများကိုယ်စီနှင့်။ ထွန်းအိမ်သာဗိုလ် သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ပြန်ဆိုနေကျ သီချင်းလေးလိုပင်..
×××မူးကြမည့်ပုလင်းသံ ပျံ့လွင့်လို့နေ ကူးပြောင်းစတန်ခူးလေမှာ×××
×××မသောက်ဖူးပြောကာ အံအောင် သောက်သူရေ×××
×××ခေါင်းကြီးစိုက်လို့ မသောက်ဘူးပြောကာ အံအောင်သောက်သူရေ×××
ရေးရင်းရေးရင်းနှင့် တောရောက် တောင်ရောက်ဖြစ်သွားပြန်လေပြီ။ ဆက်ပါမည်.. ငယ်စဉ်က ယိမ်းတိုက်ကြပုံများကို ပြန်မြင်ယောင်တော့သည်။ ကိုရင်ရှူံးငယ်စဉ်က အဒေါ်အပျိုကြီးများ အိမ်တွင်နေကြသဖြင့် သင်္ကြန်နားနီးပြီဆိုသည်နှင့် ဘယ်သူများ ယိမ်းကဖို့ခေါ်လေမည်လဲ တွတ်ထိုးတွတ်ထိုးနှင့်စောင့်နေကြလေသည်။ အေပရယ်တွင်မှ သင်္ကြန်ကျမည်ဖြစ်သော်လည်း ဇန်န၀ါရီလလောက်ကပင် အစီအစဉ်တွေဆွဲ၊ ၀တ်စုံတွေဝယ်ကြ၊ ချုပ်ကြနှင့်။ ထိုစဉ်က ယိမ်းဝတ်စုံများမှာ ယခုခေတ်အမြင်နှင့်မူ လွန်စွာရယ်စရာကောင်းလှပေသည်။ လှိုင်းတွန့်ကြီးကြီးများနှင့် အရောင်တောက်တောက်များပင်။ တစ်ချို့ယိမ်းအဖွဲ့များမှ ယိမ်းသမလေးများ ခြေသလုံးပေါ်အောင် ၀တ်သည်ကိုမြင်လျင် ထိုခေတ်က ကိုကိုကာလသားများမှာ သွားရေတောက်တောက်ကျသည်ထိ ငမ်းကြလေသည်။ ထိုကိုကိုကာလသားများမှာ ခုခေတ် နှစ်ခုတည်းဝတ်နေကြသော ကောင်မလေးများကို ပြစ်တင်ကျိန်းမောင်းနေကြသူများဖြစ်နေသည်ကို အံ့သြစရာကောင်းစွာ တွေ့ရပြန်သည်။ ရှိစေတော့… ခုနေချိန်များမှာတော့ အသက်ကြီးနေကြပြီဆိုတော့လည်း လူကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီပေါ့လေ။ သင်္ကြန်နားနီးလေ နေ့မအား ညမအား ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့် အကတိုက်ကြလေတော့သည်။ ဒီနေရာတွင် ကိုရင်ရှူံးတို့မှာလည်း မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှလာသော သင်္ကြန်ယိမ်းအကများကိုကြည့်လိုက်၊ အဒေါ်အပျိုကြီးများ အကတိုက်သည်ကိုကြည့်လိုက်နှင့် တစ်ချိန်လုံးသင်္ကြန်တီးလုံးသံများကြားမှာပင် ၂ လနီးပါးမျှ နားဒုက္ခ၊ မျက်စိဒုက္ခခံရတော့သည်။ သင်္ကြန်ယိမ်းများမှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး အတော်လေးကွာလေသည်။ သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားကြည့်ဖူးသူများ သင်္ကြန်အကဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို့ ညင်ညင်သာသာ ပျော့ပျော့နှောင်းနှောင်းလေးများဟု ထင်ကြပေမည်။ မန်းသူများမှာ သင်္ကြန်အကကို ခြေဖျားလေးများ ကြွသည်ဆိုရုံလေးမျှ ကြွကျပြီး ခြေဟန်၊ လက်ဟန် နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းလေးများဖြင့် ကကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်သူများမှာတော့ ကရင်ဒုံးယိမ်း ကကြလေသည်အလား၊ မြူးကြွခုန်ပေါက်ပြီး ခြေထောက်များ လွှားကနဲ၊ လွှားကနဲ မြှောက်မြှောက်ပြီး ကကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးတို့ ငယ်စဉ်က အကဲဖြတ်မိသလောက်ဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးများသာ သင်္ကြန်တွင် ထိုမျှတက်ကြွနေခြင်းမဟုတ်ပဲ အမျိုးသားများမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်ဖြင့် သင်္ကြန်ကို ပြင်ဆင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချို့မှာလည်း သူတို့နှစ်သက်သဘောကျရာ ကောင်မလေးများ ဘယ်မန်းတပ်(စာလုံးပေါင်းသီးခံပါကုန်)တွင် ရေကစားကြလေမည်နည်း၊ ဘယ်အချိန် အကထွက်လေမည်နည်းနှင့် လေ့လာစုံစမ်းထားပြီး သင်္ကြန်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးများ ဖန်တီးသူက ဖန်တီး၊ ထိုထက်ပိုလို့ တိုးချင်ကြသူများမှာတော့ သင်္ကြန်ယိမ်းများတွင် အဆိုရှင်အနေဖြင့် ပါဝင်ခွင့်ရရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံကြိုးစား၊ အသံကောင်းသည်ဟု မြှောက်ပေးခံကြရသူများမှာတော့ သင်္ကြန်နီးသည်နှင့် သင်္ကြန်သီချင်းများ အလွတ်ရအောင်ပြန်ကျင့်သူကကျင့်၊ ထွက်သမျှ သင်္ကြန်အခွေများမှ သင်္ကြန်သီချင်းများကို မရ ရအောင်လုပ်နှင့် သူ့ဟာနှင့်သူတော့ ရှုပ်နေကြပြန်သည်။ တစ်ချို့များကျတော့လဲ သင်္ကြန်လည်ရန်အတွက် ဂျစ်ကားမရ ရအောင် ငှားကြသူများ၊ သင်္ကြန်တွင်းလည်ပါတ်ရန်အတွက် လောင်စာစုဆောင်းကြသူများလည်း ရှိကြပြန်သေးသည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်သူများမှာတော့ ဒုန်လဘ မဲပေါက်ကြမည်ကို စိုးရိမ်သူက စိုးရိမ်၊ သင်္ကြန်တွင်း တာဝန်မှူးကျမည်ကို စိုးရိမ်သူက စိုးရိမ်နှင့်ပင်။ ထိုစဉ်က သင်္ကြန်ကို ယခုလို အချိန်အကြာကြီး ပိတ်ရက်မပေးသဖြင့်သာ တော်တော့သည်။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးရက်များတွင်မတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လူထွက်ကိုယ်တော်များ ရွှေဂေါင်းတော် အပြောင်သားနှင့် စပ်ဖြီးဖြီးကြီးများနှင့် ဆရာတော်များထံတွင် ဇွတ်အတင်းတောင်းဆိုပြီး မရရအောင် လူထွက်ပြီး ကဲကြပြန်သေးလေသည်။
ကိုရင်ရှူံးတို့လို့ ကလေးများအဖို့တော့ သင်္ကြန်အတွက် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်သေးများ ရသလောက်စုဆောင်းရင်းနှင့်ပင် အချိန်ကုန်တော့သည်။ လောင်ချာ၊ ရေဗြွတ်၊ ရေဗူဘောင်း၊ ရေသေနတ် အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှိရေချိုးတိုင်ကီများကိုလည်း မျက်စောင်းတစ်ထိုးထိုးနှင့် ဘယ်အလုံးကောင်းမလဲဟုလေ့လာအကဲခတ်ခြင်း၊ လူစည်ကားမည့်နေရာများကို လေ့လာခြင်း၊ ၅ ပိဿာဝင် ကော်ဗူးများရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းနှင့် သင်္ကြန်အချိန်တွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံးတို့ကား တိုက်ပွဲဝင်ရန် အဆင်သင့်နှင့်။ မနိုင့်တနိုင် ၅ ပိဿာဝင်ရေဗူးကြီးများကို လွယ်အိတ်တွင်းထည့်၊ ဟန်ကိုချီပြီး ရေဗြွတ်ကြီးများကိုယ်စီ၊ အိတ်ထဲတွင်လည်း တိုက်ပွဲပြင်းထန်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရေဗူဘောင်းများ ရသလောက်ထည့်ထားပြီး တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက်နှင့် တွေ့သမျှလူကြီး၊ လူလတ်၊ လူငယ်မကျန် ဗြွတ်ကြီးများဖြင့် ထိုးတော့သည်။ (ရေဗြွတ်)။ တစ်ခါတစ်လေများဆို သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာပင်ကောင်းလှသည်။ သူတို့ကလဲ အဖွဲ့တောင့်တောင့်၊ ကိုယ့်ဘက်ကလဲ နှစ်ယောက်လောက်များပါလျင်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး သေနတ်နှင့် ပြစ်သူကပြစ်၊ ဗူဘောင်းနှင့် ပေါက်သူကပေါက်၊ ဗြွတ်ကြီးများအချင်းချင်းဆိုင်ပြီး အားပါးတရ တိုက်ခိုက်ကြသည်မှာ ထိုစဉ်ကနံမည်ကြီး မာနယ်ပလောသို့ ရောက်နေသည့်အလားပင်။ လွယ်အိတ်ထဲမှ ရေများကုန်တော့မှ အပြစ်အခတ်ရပ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး လက်နက်ရိက္ခာဖြည့်တင်းရန်အတွက် အုန်းလက်လေးများကာထားသည့် ရေကစားမန်းတပ်များသို့ ချီတက် လက်နက်ဖြည့်တင်းပြီးနောက် တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်နှင့်ပင်။ ညနေမိုးချုပ်တော့မှသာ အိမ်သို့ပြန်ရောက်တော့သည်။ ညဘက်တွင်မတော့ အေးအေးလူလူ မိဘများခေါ်ဆောင်ရာ ယိမ်းအဖွဲ့များကပြရာသို့ လိုက်ကြည့်ကြလေသည်။ သင်္ကြန်အပြီးတွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံးတို့ ကလေးတစ်သိုက်မှာ မျက်ကွင်းဖြူလေးများနှင့် မျောက်ကလေးများအဖြစ်နှင့် ကျန်ခဲ့တော့လေသည်။
ထို့နောက်များတွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် တောင်ပေါ်သို့ရောက်သွားပြီးသည့်သကာလ၊ ငယ်သူငယ်ချင်းများနှင့် ခွဲခွာခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ကြောင်း သင်္ကြန်သည် ကိုရင်ရှူံးနှင့် လုံးဝ ကင်းကွာသွားတော့လေသည်။
မှတ်မှတ်ရရဆိုလျင် လူပျိုပေါက်ဖြစ်ကာစက သင်္ကြန်ရက်တွင် မန္တလေးရောက်နေသည်မှ လူရှုပ်နားရှုပ် မျက်စိရှုပ်သဖြင့် မေမြို့ပြန်တက်ပြီး အိမ်တွင် နားနားနေနေ အနားယူနေရာမှ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးတစ်ယောက်မှ ဇွတ်အတင်းလာခေါ်သဖြင့် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်၊ မိုးကာအကျီင်္ကြီးကိုခြုံပြီး စက်ဘီးတစ်စီးစီဖြင့် မေမြို့အနှံ့ ရေပက်ခံထွက်ကြလေသည်။ အတော်လေးပင်စည်ကားပါပေ၏။ ယူဂိုဆလပ်မှ မြို့ပါတ်လမ်းအတိုင်း ထွက်လာရာ ဦးဆရွတ်ခြံရှေ့တွင် တစ်ခါ ဗွမ်းကနဲ ရေပက်ခံလိုက်ရသည်။ မဆိုးဘူးဟဟုတော့ ထင်မိသည်။ ရေပက်မခံရတာကြာပြီမို့လားမသိ၊ ကိုယ်တွင်တော့ ရေမစိုပေ။ မိုးကာအကျီင်္ကြီးဝတ်ထားသည်မဟုတ်လား။ ထိုမှဆက်လက်နင်းလာရာ နောက်၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ဥာဏ်တောလမ်းဆုံသို့ရောက်၏။ ထိုအခါတွင်လဲ ဗွမ်းကနဲတစ်ခါ၊ ထို့နောက် ဆက်လာခဲ့ပြန်ရာ နောက်ထပ် နာရီဝက်ခန့်တွင်မတော့ ကန်တော်လေးသို့ရောက်တော့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူဌေးများဇိမ်ခံရန် ၀ယ်ထားသော အိမ်များရှိလေရာ ရေလောင်း၊ ရေပက်ကြသူ အတော်များလေသည်။ ကန်တော်လေးတွင်းမှ ရေများကို မော်တာဖြင့်စုပ်ပြီး ပက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးတို့လည်း စက်ဘီးမှောက်မည်စိုးသည်နှင့် ဆင်းတွန်းပြီးလျှောက်ကြသည်။ ပြုံးပြုံးလေးဖြင့် ရေပက်ခံကြမည်ဟု အားခဲရင်း အိမ်သုံးလေးအိမ်သာလွန်သွားသည်။ ရေတစ်ဗွမ်းမျှ မခံလိုက်ရသဖြင့် မျက်နှာလိုက်လေခြင်းဟု မခံမရပ်နိုင်ဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်လျှောက်ကြလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီး ကလပ်လမ်းအတိုင်းထွက်လာရာ ကျောက်တောင်ရောက်တော့မှပင် တစ်ခါဗွမ်းခံရတော့သည်။ ထိုမှတစ်ဖန် ခြေဆန့်ကြရာ ပြည်တော်သာကွက်သစ်၊ ထိုမှတစ်ဖန် ထောက်ပို့၊ ထို့နောက် ရွာသစ်ကလေးမှ ပါတ်ပြန်လာရင်း နောက်ဆုံး ယူဂိုဆလပ်သာပြန်ရောက်သွားသည်၊ စုစုပေါင်းမှ ၅ ခါလားမသိ အဗွမ်းခံလိုက်ရလေသည်။ ထိုမျှနှင့်ပင် သင်္ကြန်ကို စိတ်ကုန်သွားပြီး နောင်နှစ်သင်္ကြန်များတိုင်း အိမ်အောင်းသည့်အခါအောင်း၊ မိဘများဝတ်စေချင်လျင် သင်္ကန်းဆီးလိုစီး၊ တစ်ချို့တစ်လေနှစ်များတွင်မတော့ ဘုရားကျောင်းမှ လူငယ်လေ့လာရေးများနှင့် လိုက်သည့်အခါလိုက်နှင့်
ကိုရင်ရှူံးနှင့် သင်္ကြန် လုံးလုံးကြီးကွာရှင်းပြတ်စဲထားသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုခန့်ပင်ရှိတော့မည်။ ခုနေများ ရုတ်ချည်းစိတ်ထဲလွမ်းသလိုလို ရှိလာသဖြင့် စိတ်ကူးပေါက်ရာ ကပေါက်တိကပေါက်ချာများ ချရေးမိလိုက်ရပါကြောင်း…။
တစ်ချို့ယိမ်းအဖွဲ့များမှ ယိမ်းသမလေးများ ခြေသလုံးပေါ်အောင် ၀တ်သည်ကိုမြင်လျင် ထိုခေတ်က ကိုကိုကာလသားများမှာ သွားရေတောက်တောက်ကျသည်ထိ ငမ်းကြလေသည်။ ထိုကိုကိုကာလသားများမှာ ခုခေတ် နှစ်ခုတည်းဝတ်နေကြသော ကောင်မလေးများကို ပြစ်တင်ကျိန်းမောင်းနေကြသူများဖြစ်နေသည်ကို အံ့သြစရာကောင်းစွာ တွေ့ရပြန်သည်။
မနှစ်က ကျုပ်ရဲ့ သင်ချာဂျီးကို ဝေဖန်တာ ဘယ်ကောင်ဒုံး…။
သတ္တိရှိရင် ဖားပြုတ်နဲ့ ပြိုင်ကိုက်မားးးးး။
(ကိုရင်ရှူံးနှင့် သင်္ကြန် လုံးလုံးကြီးကွာရှင်းပြတ်စဲထားသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုခန့်ပင်ရှိတော့မည်။)
သင်္ကြန်နဲ့တစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ရှိတော့မယ်။
ကလေးဘ၀အရွယ်တုန်းကလောက်သာ သင်္ကြန်ဆိုတာကို ရသစုံအောင် ခံစားဖူးပေမယ့်
ဘာဆို ဘာမှ မဆိုင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီကောလားးးးးးးးးးးး
အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲ ဒါလည်း ပါမယ် နော် .. :harr:
အန်တီမမရေ… နိုနဲ့ တိတ် တိတ်၊ ဘွတူတွေပါပဲ
အဲဒီဟာကြီးကို ကြည့်မရတော့လို့ ကျွန်တော်လဲ ခပ်ကင်းကင်းကိုနေတာ
(ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကိုအောင် ဖြစ်နေလားမသိ :hee: )
ဒီ သင်္ကြန်ကို ဦးမာဃ မကဲတာ နည်းနည်းတောင် ကြာပေါ့
သိကြားမင်းတာဝန်နဲ့ဆိုတော့ သူများအပြစ်တွေပဲ လိုက်ပြီး ကြည့်နေရတာနဲ့
သားနဲ့သမီးကရှိလာတော့ သူတို့ကြည့်ဖို့ ပျော်ဖို့တော့
အော်…. ကို လူရယ် သင်္ကြန်နဲ့တောင် ကွာရှင်းပြတ်စဲ ရတယ်လို့ အင်း အဲဒိ သင်္ကြန် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတယ် ဆိုတဲ့ အသုံးတွဲထားတာလေးကို သဘောကျနေတာ ……။ အမှတ်တစ်မဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ပေမဲ့ စေ့စေ့တွေးကြည့်လိုက်တော့ မှ အင်း အဲဒိ အတွဲ ကြိုက်တယ်ဗျာ စကားလုံးတွဲတာကိုပြောတာနော် …။( တောင်တောင်အီအီ လျှောက်တွေးနေမှာစိုးလို့ …………. ကပေ တို့ အံဇာဒုန်းတို့က လွယ်ဒဲ့ဟာတွေဟုတ်ဖူး …။ ပြောသာပြောရ သူရို့ကြောက်နေရသေးဒယ် )
အရင်ကတော့ စိတ်လိုက်လက်ရ ဟ၀ှာဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ
ခုချိန်မှာ စိတ်နာနာနဲ့ လှည့်တောင် မကြည့်ချင်တော့သလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးထိရောက်စေချင်လို့ပါ ဦးနေရေ
ငယ်ငယ်က ကဲခဲ့တာလည်း ခပ်ဆင်ဆင်..
ခုတော့ မကဲဖြစ်တာအတော်ကြာပေါ့.. လွမ်းပ ငယ်ဘွသင်္ကြန်ရယ်
ခါတိုင်း နှစ်တွေတော့ ရိုးရိုးလေး လွမ်းနေကြရယ်ပါ..
ဒီနှစ်တော့ တစုံတယောက် (စီဒီတူ.. ဒေါ်ဆွိ) ကိုမျှော်ကိုးပီး
ဒါနဲ့ ကိုရင့်ပို့စ်ဖတ်ပီး ခြင်္သေ့ကျွန်းကကြီးဒေါ်တော့..
ဒီ မျက်လုံး အမြင်တွေ ဝေဝါးပုံကတော့ ဒီ ကော်မန့်ကို ဘယ်လိုတွေဖတ်မိတုန်းမသိဘူး။
ကျုပ် အတင်းပြောတာတော့ မိပြီ။
ကျုပ်ကတော့ မန်းလေးသင်္ကြန်ကိုပဲ ပျော်ဖူးတာဆိုတော့ မန်းလေးကိုပဲ လွမ်းပါတယ်ကွယ်။
နောက်တခါ ကျုပ်နဲ့ ကြုံအောင် မန်းလေး သင်္ကြန်လာနိုင်ရင်တော့ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းကြောင်း ပြချင်ပါရဲ့။
ဒီ ဧပလယ် ပြန်စရာ အကြောင်းတွေ အများဂျီးရှိသော်လည်း မပြန်နိုင်လို့ ဒီ စာ ဟာ ကျုပ်ကို နှိပ်စက်တဲ့ စာ ပါ တော့။
(အပေါ် က ကော်မန့် နဲ့ မရော ရ)
နောက်မှ သင်္ကြန်ဇာတ်လမ်းတွေ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း တင်ဦးမှ။
ဂလိုပါ။ ညလေးတွေ အတုခိုးမမှားစေချင်လို့။ ကွိကွိကွိ။
စင်ရှေ့ အဝေးကနေ သူများရေပက်နေတာ ကို(ကိုယ် သဘောကျတဲ့သူကိုပေါ့)ငေးရတာ၊ ဟိုကပြန်ကြည့်လိုက် မျက်လုံးဆုံအောင် လုပ်လိုက်နဲ့ အခြေအနေ ကောင်းရင် ရေမွှေးလေးသွား ဆွတ်လိုက်နဲ့ သင်္ကြန်သာ ပြီးသွားတယ် ဒါကမတက်ပဲ ပြီးခဲ့ရတာတွေ လွမ်းတာဗျာ၊ ဆယ်ကျော်သက်ကပေါ့ဗျာ၊ အခုတော့။ နိုချင်လာပြီ။
နာကွ.. (၂) နှစ်လောက် အကအဖွဲ့ထဲ ပါဖူးတယ်…. ဘယ်လိုကခဲ့သလဲတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး… ဘာတဲ့.. သင်္ကြန်ပါဆိုမှ မြူမှောင်ဝေကင်းကို ပုဂံအကနဲ့ ထွက်ရသေးတယ်…
အခုထိတော့ ဇာတိသင်္ကြန်ကလွဲလို့ ဘယ်မှ မသွားဖူးဘူးရယ်… အသက်လည်းရလာပြီဆိုတော့ အရင်လိုလည်း မလည်ဖြစ်တော့ပါဘူး… (လည်ရအောင်ကလည်း မြို့က ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်ရင် ငါးမိနစ်လောက်ဆို တစ်ပတ်ပြည့်ရော.. )
ဒီနှစ်လည်း နယ်ပြန်မယ်ဗျို့…. အိမ်တွင်းပုန်းပြီး အိပ်မယ်..စားမယ်… စာဖတ်မယ်… ညဘက်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်ထွက်စားမယ်… အချို့အချို့ လူပိုဂျီး..အပိုဂျီးဒွေလို ဘူ့မှ မလွမ်းဝူး.. :harr:
ကိုရှူံးက ယူဂိုဆလပ်မှာနေခဲ့တာလား ..
မိုးစက်လည်းအဲမှာနေခဲ့ဘူးတယ်.. ယူဂိုဆလားဗီးယားတွေ ပုံစံတူဆောက်သွားတဲ့အိမ်တွေလေ
ညနေဘက်ဆို မောင်နှမ ၂ယောက်စက်ဘီးနဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ပတ်ပတ်နေကြ..
၂၀၀၆လောက်ကတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တော့ တစ်ချို့အိမ်တွေ အထဲက နံရံကပ်ဗီရိုတွေ၊ စင်တွေမရှိတော့ဘူး .. လူအပြောင်းအလဲမှာ ဝင်ပြီးခိုးဖြုတ်သွားကြတာ
အဲ .. သင်္ကြန်ပါဆို မဆိုင်တာတွေလျှောက်ပြောနေတယ်..
သင်္ကြန်ကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင် နားရက်ကတော့ဆိုင်တယ် .. ဒီနှစ်တော့ တရားစခန်းလည်းမဝင်တော့ဘူး စာအကြွေးတွေဆပ်ရမယ် .. တူလေးနဲ့ကစားမယ် ..မုန့်တွေလုပ်စားမယ်
မိုးဇိရေ.. ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တုန်းကတော့ သီရိရိပ်သာဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါတယ်… နံရံကပ်ဗီဒိုတွေကတော့ အိမ်တိုင်းလိုလို မရှိကြတော့ပါဘူး (လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်၊ နှစ် ၂၀ ခန့်ကပါ) ခုနေများ သတိရလို့ Google Map ကနေပြန်ရှာကြည့်တာတော့ အိမ်လုံးပုံလေးတွေ တွေ့နေရတုန်းပါ.. ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့တုန်းကတော့ စစ်ဆေးရယ်၊ DSA ရယ်၊ လေ့ကျင့်ရေးရယ်၊ ပညာရေးရယ်ဆိုပြီး တပ်သုံးခုကခွဲဝေယူထားခဲ့တာပေါ့.. စစ်ဆေးကတော့ ပါရဂူတွေနေတယ်၊ DSA ကတော့ ပါမောက္ခတွေနေတယ်၊ လေ့ကျင့်ရေးကတော့ အရာရှိတွေနေတယ်၊ ပညာရေးကတော့ ဆရာတွေနေတယ်ပေါ့လေ.. အဲဒီမှာ စစ်ဆေးကယူထားတဲ့ အိမ်တွေမှာ နေမယ့်သူတွေမရှိတာများတော့ အကုန်ပျက်စီးတာပါပဲလေ.. ခြံကျယ်ဝန်းကျယ်ကြီးတွေနဲ့ သက်တမ်းရင့်ထင်းရှူးပင်ကြီးတွေအောက်မှာ ဆောင်းညတွေ မီးလှုံပြီး သီချင်းဆိုနေခဲ့ရတာတွေ လွမ်းမိသား.. ခုများတော့ ပြန်ရောက်ရင် ရောက်ဖြစ်အောင် သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်..
စကားမစပ် မိုးဇိကို သိနေသလိုပါပဲ… MES မှာလုပ်နေတာမလား…
သီရိရိပ်သာ.. ဟုတ်ပရှင် အဲဆိုင်းဘုဒ်လေးတောင် ယိုင်ရွဲ့နေပြီ တော်တော်များများက ယူဂိုဆလပ်လို့ပြောမှသိကြတယ် .. စိုက်သမျှဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ သီးပင်စားပင်အပြည့်အစုံနဲ့ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးတွေကိုလွမ်းတယ် ..သင်္ကြန်ဆိုတာအဲဒီရပ်ကွက်အပြင်မှာပဲကျတာနော် ဥာဏ်ဏောပွဲမှာ လိုက်ပို့တဲ့လူတွေကို မျက်ခြေဖြတ်ပြီး လျှောက်သွားခဲ့ရတာလည်းပျော်စရာပဲ နေရတဲ့အချိန်နဲပေမယ့် အဖြူသက်သက်အမှတ်တရလေးတွေ အများကြီးရှိခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ရှင်.. အပိုင်ရောင်းပေးရင်တော့လိုချင်မိတယ်..
၂၀၀၆လောက်က တစ်ခါရောက်သေးတယ် နောက်ပိုင်းတော့ မေမြို့ရောက်ပေမယ့် အဲဒီကိုမသွားဖြစ်တော့ဘူး .. သိတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေ..
MES ?? ဟုတ်ဘူးကိုရှူံးရဲ့ .. ကိုရှူံးကိုတော့ သိဘူးရယ်
တကယ်က.. သင်္ကြန်မှာ.. အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတာတွေ.. သိပ်ထည့်ထားတာ..
မိန်းကလေးငယ်တွေက.. ယိမ်းကဖို့လူအုပ်စု,စု.. ရပ်ကွက်လှည့်.. ငွေကောက်ကြတာ..။
ယိမ်းကရင်.. မဏ္ဍပ်ရှေ့.. နေရာအခန့်ရတာကိုး..
လူငယ်ကောင်လေးတွေက.. ငွေကောက်..မဏ္ဍပ်ပြင်.. သံချပ်တိုက်..သံချပ်ရေး.. အလုပ်များရှုပ်ကြသပေါ့..
သောက်စားတာပါပေမယ့်.. အခုခေတ်လို.. အသောက်အစားက.. ထိပ်နေရာမရပါဘူး..
သင်္ကြန်သံချပ်တွေဟာ..ခေတ်..စနစ်ကိုသရော်တာမို့.. သေသေချာချာနားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ.. မေး.. မြန်း..ရေးခိုင်း.. အပူကပ်.. အဲလိုလုပ်ကြရတာပါ..
အပြိုင်အဆိုင်ရှိတာမို့.. အနိုင်ယူချင်စိတ်နဲ့အတူ.. စုပေါင်းလုပ်ဆောင်စိတ်..ခေါင်းဆောင်စိတ်.. အနုပညာ.. အကုန်ရောသမမွှေ..ပျော်ကြရတဲ့သင်္ကြန်ပါ..
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်က.. နေ့လည်ရေကစားတာနဲ့အတူ.. ညအတွက်အချိန်ယူ..မဏ္ဍပ်လှည့်.. အလှပြကားတွေကြည့်.. သံချပ်နားထောင်ရတာ..သင်္ကြန်ရဲ့ ပြယုတ်အဖြစ်.. စွဲနေအောင်မှတ်မိတယ်..
လူတွေအတွက်.. လူငယ်တွေအတွက်.. နိုင်ငံအတွက်.. နိုင်ငံရေး.. အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ..
စစ်အစိုးရက.. ၈၈အာဏာသိမ်းတော့.. သင်္ကြန်ရဲ့..အငွေအသက်နဲ့.. သာမန်လူတန်းစား(အစိမ်းမဟုတ်)ရဲ့.. ခေါင်းဆောင်မှု.. စည်းရုံးမှု.. စတာတွေအညွှန့်မတက်လာအောင်.. ဖျက်စီးပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲ.. မြင်မိတယ်..
ဒီအမြင်ကို.. ဒီနေ့.. ဖုန်းမော်နေ့မှာ.. အမှတ်တရ.. ရေးခဲ့မယ်..။
ရဲဇားပဲ ဖြစ်ဘူးပြီး မပေါင်းလိုက်ရတဲ့ သူလို့တောင် ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်
သင်္ကြန်လည်ဘို့ ရေလောင်းဘို့ ဘယ်လို မှ စိတ်ဝင်စားလို့ မရဘူး
သူများတွေ လည်တာကို ထိုင်ကြည့်နေရတာပဲ အရသာတွေ့တော့တယ်
နှစ်တိုင်း မိသားစုတွေ ရေလည်ထွက် ရင် အိမ်စောင့် ပဲ
ငယ်ငယ်က သင်္ကြန်ဆို မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးကြတယ်။
နည်းနည်းကြီးလာတော့ အိမ်နားက မဏ္ဍပ်မှာ လမ်းသွားလမ်းလာကောင်မလေးတွေကို မဏ္ဍပ်ထဲက မူးနေတဲ့သူတွေက ရေပုံးလိုက်လောင်း၊ကျောကိုပုတ်၊တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မြှောက်ပေး လုပ်ကြတာတွေမြင်ရတာ အော့နှလုံးနာလွန်းလို့ ရေပက်ခံရမှာတောင်ကြောက်ပါတယ်။(ကလေးလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ပက်တာကိုမဆိုလို)
ရေလောင်းတာ ရေကစားတာနဲ့မတူပဲ အသားယူနေကြသလိုမြင်တော့ သူတို့ရေပက်တာခံရရင် ကိုယ်သိက္ခာကို စော်ကားသလိုပဲ ခံစားရတယ်။
(ဒါကြောင့်လည်း အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်တာပေါ့လို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ)
သင်္ကြန်မှာ အလှပြယာဉ်တွေ၊သံချပ်တွေ၊စတိတ်ရှိုးတွေ ရှိခဲ့တဲ့ အချိန်ကိုတော့ ပြန်လည်တမ်းတမိပါတယ်။
ကိုရင်ရှုံး . …………….. ကျုပ် အတွက် သေချာတာ ကတော့ ဒီနှစ် သင်္ကြန် က တော့ ကျုပ် နဲ့ သူစိမ်း ပြင်ပြင်ပဲဗျာ . . ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က လဲ မော်လမြိုင် ဖားအောက် မှာ ဆိုတော့ . . သင်္ကြန် နဲ့ သူစိမ်း ပြင်ပြင် ဖြစ်တာ ဒီ နှစ် နဲ့ ဆို ၂ နှစ် ရှိပြီပေါ့ . . . . တောက် . . . ကဖက်ကပ် တို့ ကမတ် တို့ ကဲ နေမှာ များ မြင်ယောင် မိသေး . . .